स्क्रिन-स्क्रैपर एक्सटेन्सन प्लेटफर्म: आधारभूत संस्करण - सेमील्ट विशेषज्ञ
स्क्रिन स्क्रैपर वेब प्रयोगकर्ताहरु र फर्महरु जुन डाउनलोड गर्न चाहन्छन को लागी धेरै प्रभावकारी उपकरण हो। विभिन्न वेबसाइटहरु बाट सामाग्री र छवियों जस्तै जानकारी अनलाइन को एक थोक. उपकरणहरू निकाल्ने सबैभन्दा राम्रो सामग्री स्क्रिन हो - स्क्रैर सफ्टवेयर . 2002 बाट, यो उद्योगहरूको विस्तृत दायराबाट ई-पसलहरू, मेडिकल र मोटर वाहन कम्पनीहरू र अधिक ग्राहकहरूको साथ व्यवहार गर्दछ. वास्तवमा, यो एक डेटाबेस जस्तै काम गर्दछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्याण्डेड वेबमार्फत सँधै अनलाइन सँधै स्रोतबाट डेटा मेरा विकल्प प्रदान गर्दछ.
वेबसाइटहरु बाट डेटा निकालें
स्क्रीन-स्क्रैपर वेब मा लगभग कुनै पनि साइट को संभाल सकते हो. स्क्रिन-स्क्रैपरको व्यावसायिक टोलीले वेब खोजीकर्ताहरूलाई उनीहरूलाई आवश्यक परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ. ग्राहकहरूलाई उनीहरूलाई हटाउन चाहने सामग्री र तिनीहरूका डेटा ढाँचामा उनीहरूको बारेमा केही जानकारी बताउनु पर्छ. स्क्रिन स्क्रैपर बाह्य प्रोग्रामिंग भाषाहरू बाट जाभा गर्न सकिन्छ, जस्तै जावा, पीपीई र अधिक.
स्क्रिन-स्क्रैर किन प्रयोग गर्नुहुन्छ
यो एक सम्मानित सफ्टवेयर हो र विश्वका धेरै ठूला कम्पनीहरूले यो जानकारी पाउनका लागि मात्र केहि सेकेण्डमा द्रुत, सरल र सफल तरिकामा आवश्यक पर्दछ।. स्क्रिन-स्क्रैपरले ग्राहकहरूलाई दैनिक रूपमा उत्पन्न गर्न सक्छ र उद्योगमा लगभग कुनै पनि वेबसाइटलाई सम्भावित गर्न सक्छ. विशेष गरी, क्लाइन्टहरूले उनीहरूको जाँच गर्न सक्दछन् र आवश्यक परिणामहरू कुनै पनि समयमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्.
कम्पनीहरु को लागि स्क्रीन स्क्रैपर को उपयोग को लाभ
स्क्रीन स्क्रैर सफ्टवेयर को सबै भन्दा महत्वपूर्ण फायदे मध्ये एक छ यसको गति. यसले केही सेकेन्डमा ग्राहकहरूको लागि सबै डाटा सङ्कलन गर्न सक्छ. वास्तवमा, स्क्रिन स्क्रैरले कुनै पनि कम्पनीको लागि राम्रो विकल्प प्रदान गर्दछ जसले परिणाम छिटो प्राप्त गर्न आवश्यक छ. उदाहरणका लागि, यदि ग्राहकहरूले वेबमा बिखेर केहि निश्चित उत्पादहरूको मूल्यहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले यस अचम्मको सफ्टवेयर प्रोग्रामको प्रयोग गर्न सक्छन्।. यसबाहेक, स्क्रिन-स्क्रैर निश्चित डेटालाई एक प्रणालीबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा यो पनि प्रणालीहरू सँगसँगै जोड्न सक्छ. स्क्रिन-स्क्रैर खनिज डेटा निर्यात गर्नका लागि विभिन्न ढाँचाहरू समर्थन गर्दछ, जस्तै XML, HTML, CSV, पहुँच र अधिक. यसबाहेक, सबै डेटा स्वचालित रूपमा केहि ढाँचाहरूमा निर्यात गरिन्छ जुन डेटा निष्कर्ष पूरा भएपछि एकपटक ग्राहकहरू द्वारा पूर्वनिर्धारित गरिन्छ.
यो एक उत्कृष्ट सफ्टवेयर क्रस-प्लेटफर्म हो जुन लगभग कहीं पनि तैनात गर्न सकिन्छ।. साथै, धेरै सफ्टवेयर इजाजत पत्र खरीद फारम व्यावसायिक र इन्टरप्राइज संस्करणको लागि उपलब्ध छन्. यो सैकड़ों प्रयोगकर्ता र निगमहरूमा उत्कृष्ट निकाल्ने परिणाम प्रदान गर्दछ. यो नि: शुल्क स्क्रिन स्क्रैप उपकरण हो जुन कुनै पनि प्रकारको डाटा खनन, साथसाथै गतिशील पृष्ठहरूसँग काम गर्दछ. उपयोगकर्ताहरूले कार्यक्रम छिटो र सजिलै संग डाउनलोड गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई आवश्यक डाटा प्राप्त गर्न यो उपकरण प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्छन् Source .